Niely teny anivon’ny tambanjotran-tserasera facebook sy ny gazety mpiseho isan’andro iray, mahakasika io fanolanana io ny alin’ny zoma faha 24 janoary teo ka nahavoatonontonona ny polisy ho anisan’ireo nahavanon-doza. Nanome fanazavana ny teo anivon’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka ny alatsinainy teo. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Polisy na dia tsy nisy ary ny fitoriana azon’ny mpitandro ny filaminana.
Rehefa natao ny famotorana dia fantatra fa nisy 3 lahy nitondra moto no naka io vehivavy voalaza etsy ambony io teny Ambodrona ny zoma teo, tamin’ny 10 ora alina. Nilaza ity vehivavy vao 16 taona monja ity fa naolan’ ny 2 tamin’ireo 3 lahy izy taorian’ny fakan’ireto farany azy, tsy nisy endrika namantarany ireto olona ireto ankoatra ny pataloha miloko maitso sy akanjo ba mainty misy satroka izay nanaovan’ny iray tamin’ireo mpanolana. Tsy nisy hatreto ny porofo milaza fa polisy no nanao ilay asa ratsy.
Marihina ihany koa fa ilay olona nanaparitaka ilay vaovao tamin’ny « fb » dia mbola nitantara ihany koa fa tsy nahita mivantana ilay tranga. Tsy voamarina noho izany ilay vaovao naparitaka milaza fa Polisy tokoa no nanao ilay asa ratsy saingy efa ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana hikarohana ireo nahavanon-doza ary hamantarana tokoa raha misy mpitandro ny filaminanana voasaringotra ato anatin’ity raharaha ity. Mitohy ny fanadihadiana ary ho tanterina eto ihany ny vokatra azon’ny Polisy rehefa azo ireo olon-dratsy.